Umehluko phakathi kwama-dumbbell nama-kettlebell.
Abanye abantu bangase bacabange, ingabe i-kettlebell ayiyona nje i-dumbbell?Ngokuvamile, ziyefana kwezinye izici.Kodwa umehluko we-kettlebell ukuma kwayo.Kungase kubukeke njengemishini evamile yokuqeqesha amandla, kodwa umklamo wesibambo esimise u-U empeleni ushintsha iphethini yomsebenzi welo...
Ulwazi oluyisisekelo lokuqeqeshwa kwe-kettlebell abaqalayo okufanele bazi.
Ukuqeqeshwa okuningi kwe-kettlebell kuyashukumisa, okusho ukuphakamisa ngokushesha, kunokuqeqeshwa kwamandla alawulwayo, iningi lethu elikujwayele ejimini.Lolu hlobo lokuqeqesha lungenza ukushaya kwenhliziyo yakho kukhuphuke ngokushesha njengoba wenzile ezivivinyweni ze-aerobic zangaphambilini.Hhayi lokho kuphela, ukuqeqeshwa kwe-kettlebell ku ...
Ingabe uyazazi izinzuzo zokuzigcina ufanelekile?
Ukuzivocavoca kungamisa kabusha isimo sakho sengqondo.Uthi bewazi?Ukuzivocavoca kungenye yezindlela ezingcono kakhulu zokwelapha ukudangala.Ngakho abanye abantu bayathanda ukuya ejimini uma besesimweni esibi.Ngesikhathi sokuzivocavoca, ukugcwala kwe-serotonin emzimbeni womuntu kuzokwanda, futhi ama-endorphin ne-norepinephrin ...
Amaphuzu abalulekile okuthenga izingubo ze-yoga
Njengamanje, izingubo ze-yoga zezinto ezihlukahlukene ziyatholakala emakethe.Lapho ukhetha, kufanele ukhethe impahla.Iyiphi impahla yezingubo ze-yoga enhle?Wonke umuntu angase afise ukufunda mayelana nezici zezingubo ze-yoga zezinto ezihlukahlukene ngaphambi kokuthenga.1. Ukulingisa i-polyester si...
Indlela yokuzivocavoca ngokwesayensi?
Ukufaneleka akugcini nje ngokuvumela abantu ukuthi bagcine umzimba ophelele, kodwa futhi bazigcine befanelekile, kodwa ukufaneleka nakho kunamaphuzu athile okufanele banake, ngakho-ke ukuzivocavoca kanjani ngokwesayensi?Yiziphi izinyathelo zokuphepha zokufaneleka?Ungazivocavoci ungenalutho, futhi ungasebenzi ngemva kokudla.Akukuhle kuwe...
I-Dumbbell Price, I-Eco Friendly Yoga Mat, I-Non Slip Yoga Mat, I-Tpe Yoga Mat, Isethi ye-Dumbbell, I-Dumbbell Eguquguqukayo,